हनिमुन सिस्टाइटिस- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
- नवविवाहितामा हुने मूत्रमार्गको संक्रमण
- नेपालमा सय जना नवविवाहितामध्ये १० जना जतिलाई यो संक्रमण हुने गरेको अनुमान
वैशाख २३, २०७४ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — यो मौसम विवाह र हनिमुनको पनि हो । यही मौसममा नवविवाहितामा, नवदुलहीमा मूत्रमार्गको समस्या पनि हुने गर्छ । मूत्रमार्गको संक्रमण (युरिनरी ट्रयाक इन्फेक्सन : युटीआई) भर्खर विवाह गरेका महिलामा हुने एक किसिमको समस्या हो । यसलाई बोलचालको भाषामा ‘हनिमुन सिस्टाइटिस’ पनि भनिन्छ ।
यो मौसम विवाह र हनिमुनको पनि हो। यही मौसममा नवविवाहितामा, नवदुलहीमा मूत्रमार्गको समस्या पनि हुने गर्छ। मूत्रमार्गको संक्रमण (युरिनरी ट्रयाक इन्फेक्सन : युटीआई) भर्खर विवाह गरेका महिलामा हुने एक किसिमको समस्या हो। यसलाई बोलचालको भाषामा ‘हनिमुन सिस्टाइटिस’ पनि भनिन्छ।
हाम्रो मुलुकमा यो समस्याबारे खासै कुनै अध्ययन भएको छैन। तर, सय जना नवविवाहितामध्ये १० जनासम्ममा हाल यूटीआई पाइने गरेको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. गणेश दंगालको अनुमान छ।
बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) को तथ्यपत्रअनुसार, सामान्यत: ब्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा हुने सिस्टाइटिस (मूत्राशयको संक्रमण) कहिलेकाहीं मूत्रथैली उत्तेजित वा क्षतिग्रस्त हुँदासमेत हुन्छ।
आन्द्रा र छालामा नोक्सान नपुर्‍याउने गरी रहेका ब्याक्टेरिया मूत्रमार्ग भएर मूत्रथैलीमा पसेपछि त्यसले त्यहाँ संख्या बढाउन थाल्छ। ब्याक्टेरिया, ढुसी हाम्रो पाचनतन्त्रबाट निस्केर वा अन्य माध्यमले मूत्रमार्गको पर्खालमा टाँस्सिएर तीव्र गतिमा संख्या विस्तार गर्छ र यूटीआई उत्पन्न गर्छ। धेरैजसो महिलालाई आन्द्रामा पाइने ब्याक्टेरियाले गर्दा यूटीआई हुने गर्छ।
‘यो मूत्रनलीको संक्रमणलाई बेवास्ता गर्दा, समयमै उचित उपचार नगर्दा यसले मृगौलामा समेत असर पार्न सक्छ,’ डा. दंगाल भन्छन्, ‘यो समस्याले जटिल रूप लिएपछि मृगौला फेल भएको केससमेत यदाकदा पाउने गरिन्छ।’
यूटीआई मूत्रनली, पिसाबको थैलो, पिसाबलाई मृगौलादेखि मूत्राशयसम्म लैजाने नली र मृगौलामा हुने संक्रमण हो। यूटीआईको जोखिम पुरुषको दाँजोमा महिलालाई बढी हुन्छ। महिलाको मूत्रनली गुदद्वारको धेरै नजिक हुन्छ। यसले गर्दा मलमा भएका ब्याक्टेरियाहरू महिलाको मूत्रनलीमा जाने जोखिम बढी हुन्छ। यो संक्रमणको विस्तार हुँदै मृगौलासम्म पुगेपछि यसले मृगौलालाई समेत नोक्सान गर्न सक्छ। हनिमुन सिस्टाइटिस भएका सयमध्ये दुई/तीन जनासम्म मृगौला फेल हुने स्थितिमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ।
‘भर्खर विवाह गरेका बेला बढी मात्रामा यौनसम्बन्ध हुने भएकाले पिसाबको थैलोमा बढी मात्रामा ब्याक्टेरिया पुग्न सक्छ र हनिमुन सिस्टाइटिस हुने गर्छ,’ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘पुरुषको मूत्रनली १९ सेन्टिमिटर लामो हुन्छ भने महिलाको त्योभन्दा निकै छोटो। करिब ४ सेन्टिमिटरको। त्यही भएर महिलाहरूलाई मूत्रमार्गको संक्रमण बढी हुन्छ।’
अघि नै भनियो, विवाहलगत्तै हुने यूटीआईको समयमै उपचार नगरे मृगौलामा समेत क्षति पुग्न सक्छ। मूत्रमार्गमा हुने यो संक्रमण मृगौलासम्म पुग्दा मृगौलाले काम गर्न छाड्ने स्थिति आउन सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यही भएर नवविवाहिताहरूलेमूत्रमार्गको संक्रमण हुनासाथ चनाखो भएर चिकित्सकीय सल्लाह लिइहाल्नुपर्ने डा. गौतम औँल्याउँछन्।
बिहेबारीको समयमा अस्पतालको बहिरंग विभागमा मूत्रनलीको संक्रमण लिएर पुग्ने नवविवाहिताहरूको संख्या बढ्ने गरेको युरोलजिस्ट डा. पवनराज चालिसेको अनुभव छ। उनी भन्छन्, ‘समयमै यो संक्रमणको उपचार नगरे मृगौलामा समेत क्षति पुग्न सक्छ। यस्तो संत्रमण भएका कतिपय महिलालाई त निरन्तर औषधि खानुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ।’
हनिमुन सिस्टाइटिसले महिलालाई त्यो आनन्ददायक समयमा सधैँभरिका लागि समस्यामा पार्न सक्ने हुँदा यौनक्रियापछि महिलालेतुरुन्त पिसाब फेर्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा यो संक्रमण हुने सम्भावना निकै घट्ने डा. गौतम बताउँछन्।
यौनसम्पर्कलगत्तै मांशपेसी आरामको स्थितिमा नआउने हुनाले केही महिला तत्काल पिसाब फेर्न तम्तयार हुँदैनन्। तर, केही समयपछि भए पनि पिसाब फेर्दा यसले समागमका माध्यमले मूत्रमार्गमा प्रवेश गरेका ब्याक्टेरियाहरूलाई बगाइदिन्छ। ब्याक्टेरिया बगेकोभन्दा जमेको पिसाबमा बढी फस्टाउने डा. गौतम सुनाउँछन्।
यस्तै, पुरुष र महिला दुवैले आफ्ना यौनांगको स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
दिसा, पिसाबपछि साबुनपानीले राम्ररी हात धुनुपर्छ। यौनसम्पर्कपछि पनि सरसफाइमा सचेत हुनुपर्छ।
एनएचएसका अनुसार, ब्याक्टेरिया कसरी मूत्रथैलीमा पुग्छ भन्ने सदैव स्पष्ट हुँदैन। तर यो यौनसम्पर्क, पछाडिबाट (गुदद्वारबाट) अगाडि (योनिमार्ग) तर्फ सफा गर्दा, टेम्पोन वा युरिनरी क्याथेटर हाल्दा, परिवार नियोजनका लागि डायफ्राम उपयोग गर्दा यो संक्रमणहुन सक्छ।
यति मात्र नभई, यौनक्रियामा हुने घर्षणले समेत सिस्टाइटिस उत्पन्न गर्छ। यस्तै, बास्नादार साबुन, ‘बब्बल बाथ’ जस्ता रासायनिक उत्तेजकले समेत सिस्टाइटिसलाई निम्त्याउने गर्छन्।
- पिसाब पोल्नु। बारम्बार पिसाब लाग्नु।
- योनि चिलाउनु। गन्हाउने तातो पिसाब हुनु।
- पिसाबको रंग धमिलो वा हल्का रातो हुनु।
- पेटको तल्लो खण्डमा दबाब अनुभव हुनु वा दुख्नु।
- कसैकसैलाई उच्च ज्वरोसमेत आउनु।
- शारीरिक सम्पर्कपछि यौनांगको सफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
- यौनसम्पर्कपछि महिलाले पिसाब फेर्ने गरे यो संक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ।
- महिलाले यौनांग सफा गर्दा अगाडिबाट पछाडितर्फ पुछ्ने गर्नुपर्छ।
- पानी पर्याप्त खाने गर्नुपर्छ।
- दुवै जोडीले व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७४ १२:४५
हाम्रो मुलुकको अधिकांश घरआँगनमा तुलसी पाइन्छ । त्यसबाट थाहा हुन्छ, मानिसका लागि तुलसीको महत्त्व कति छ भनेर ।
तुलसी उच्च स्तरीय चामत्कारिक औषधि हो । पुरातन धर्मग्रन्थ वेदमा समेत तुलसीको बिरुवाको पवित्रतासँगै औषधीय गुणको वर्णन गरिएको छ ।
झाडीका रूपमा रहने तुलसीको बोट एकदेखि तीन फिटसम्म अग्लो हुन्छ । यसको बिरुवा पवित्र मानिन्छ । तुलसी थुपै्र जातका भए पनि सबै फाइदाकारी नै छन् ।
गुण–धर्मअनुसार कालो तुलसीलाई राम्रो मानिन्छ । एलोप्याथिक, होमियोप्याथिक र युनानी औषधिहरूमा समेत तुलसीलाई कुनै न कुनै रूपमा उपयोग गरिन्छ । आयुर्वेदअनुसार तुलसीलाई शरीर, मन र आत्माको पीडा हरण गर्ने मानिन्छ । भनिन्छ, तुलसीले जलन/पोलाइ कम गर्छ । यसमा जीवाणुनाशक मूत्रवद्र्धक गुणसमेत हुन्छ । यसले संक्रमण हटाउनुका साथै तनाव र अन्य रोगविरुद्घ प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
आयुर्वेदका चिकित्सकका अनुसार तुलसीको नियमित सेवनले स्वाइन–फ्लुजस्ता फोक्सोको संक्रमणसँग जुध्न सहयोग मिल्ने गर्छ । तुलसीले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने मान्यता छ । यसलाई बलवद्र्धक औषधिको रूपमा समेत उपयोग गरिन्छ । यसको नियमित उपयोगले कार्यक्षमतामा वृद्घि हुन्छ र शीघ्रपतन हट्छ ।
युनानी चिकित्सा पद्घतिअनुसार तुलसीमा रोग निको पार्ने निकै क्षमता हुन्छ । यसले रुघा–खोकीको असरलाई कम गर्छ । यसले ज्वरो कम गर्छ । मुटुको रक्तनली, कलेजो र फोक्सोको रोगमा लाभदायक हुन्छ । उच्च रक्तचाप र चिनीको मात्रा घटाउनसमेत सहयोगी मानिन्छ ।
तुलसीमा अनेक जैव सक्रिय रसायन पाइन्छ, तिनमा ट्रयानिन, स्यावोनिन, ग्लाइकोसाइड र एल्केलाइडस प्रमुख हुन् । हालसम्म तुलसीमा पाइने रसायनहरूको पूर्ण विश्लेषण हुन सकेको छैन । यसमा पाइने पहेलो वाष्पशील तेलको मात्रा संगठन, स्थान र समयअनुसार परिवर्तित हुने गरेको छ । यसमा सामान्यत: ०.१ देखि ०.३ प्रतिशतसम्म तेल पाइन्छ । ‘वेल्थ अफ इन्डिया’ का अनुसार यो तेलमा करिब ७१ प्रतिशत युजिनाल, २० प्रतिशत युजिनाल मिथाइल इथर तथा ३ प्रतिशत कार्बाकोल हुन्छ ।
हरियो तुलसीमा कालो तुलसीको दाँजोमा केही बढी तेल हुनुका साथै यसमा सापेक्षित घनत्त्वसमेत बढी हुन्छ । यसको पातमा ८३ मिलिग्राम प्रतिशत भिटामिन ‘सी’ एवं २.५ मिलिग्राम प्रतिशत क्यारेटिन हुन्छ । तुलसीको बीउमा भने पहेँलो तेल करिब १८ प्रतिशत पाइन्छ ।
आधुनिक अनुसन्धानअनुसार तुलसीको बोटले वातावरणलाई समेत स्वच्छ पार्ने गरेको छ । तुलसीको बोटले लामखुट्टे, झिँगा लगायतका कीरा–फटयांग्रालाई समेत भगाउँछ ।